Mmeghachi omume Ọgwụ - Shenzhen Youde prototype ejedebeghị
Gịnị bụ rim
Rim bụ a ọhụrụ usoro ụzọ na-amị nnukwu size na nnukwu ibu ngwaahịa ngwa ngwa. Rim usoro monomer ma ọ bụ tupu-polima (Pu ihe) na mmiri mmiri ala na a ụfọdụ hà, nke tụrụ site metering mgbapụta Ịgwakọta na agwakọta isi nke a ebu. Mgbe ngwakọta ga-agbara ndi mmadu n'ime ebu n'okpuru a ala nsogbu / ụlọ okpomọkụ na gburugburu ebe obibi, ọ ga-ngwa ngwa omume na cross-ejikọ bụla.. Mgbe iri nkeji, ọ ga-sikwuo ike, wee hapụ ya si ebu, na akụkụ bụ rim ngwaahịa. Usoro a nwere ike mfe dị ka: nchekwa, mmesho, ngwakọ, ebu ndochi na ime, demould na post-nhazi.
The usoro nke Mmeghachi omume Ọgwụ na ịkpụzi
abụọ raw mmiri mmiri na ihe onwunwe na-eji na-apụta usoro e echekwara abụọ esite na ụfọdụ okpomọkụ, na-esite bụ ọtụtụ ndị na-mgbali arịa. Na ịkpụzi, stoste emekarị na 0,2 ~ 0.3 MPa ala nsogbu na-esite, na-ekesa mgbe niile na-esite, okpomọkụ exchangers na agwakọta isi. Ma polyurethane, nkezi okpomọkụ nke stoste bụ 20 ~ 40 ℃, na okpomọkụ akara ziri ezi bụ ± 1 ℃.
General nkịtị resin: polyurethane resin, vinyl Ester, amide Ester resin, unsaturated resin, epoxy resin na omenala mejupụtara ihe onwunwe, wdg
Nọmalị ihe: HD-PU4210, DCP-rim, AXSON-rim 875, etc.
PS: bụla. oge nke rim usoro bụ tumadi site na ịkpụzi ihe onwunwe Nwa na ngwaahịa size mkpebi. Ke adianade do, rim ngwaahịa mkpa na-aga na nke abụọ ime mgbe ntọhapụ si ebu. Na dị ka rim usoro bụ ngwa ngwa (15-30 nkeji / mpempe) na elu-nkenke, ọ dabara na-emepụta ọtụtụ buru ibu na nnukwu size na ngwaahịa, na nke nke nnukwu mgbatị akụkụ bụ 2000mmX1200mmX1000mm, maka 10KG.